Kwuru na Long Tail na Industrylọ Ọrụ Egwu | Martech Zone
Wednesday, September 27, 2006 Wednesday, July 9, 2014 Douglas Karr
M zutere ụfọdụ ndị ọzọ Indianapolis Marketing ndú a di na nwunye izu gara aga na-atụle Ogologo Ogologo. Ọ bụ nnukwu akwụkwọ na Chris Anderson bụ onye edemede mara mma.
Ebe ọ bụ na ekesara akwụkwọ ahụ, ụfọdụ ndị na-ese Chris na echiche na ọ 'mepụtara' n'ụzọ ụfọdụ. Ogologo Ogologo. Echeghị m na Chris chepụtara tiori nke Ogologo Ogologo, ma ọ kọwara ya nke ọma.
N'ime nri ehihie anyị, ka ndị mmadụ na-atụle akwụkwọ a, echere m na ọtụtụ n'ime anyị bịara ghọta nke ahụ Ogologo Ogologo bụ usoro a na-apụghị izere ezere dịka ụlọ ọrụ ọ bụla. A na-emebu nanị di na nwunye nke ụgbọala na-emepụta, a ọnụ ọgụgụ dị nta nke breweries, a ole na ole ngwá electronic na-emepụta… ma mgbe igafe dị ka nkesa na n'ichepụta teknụzụ ghọrọ usoro, arụmọrụ ka na-eto. Ogologo ọdụ dị ka a Iwu Moore maka n'ichepụta na nkesa.
Echere m na ụlọ ọrụ ndị ihe doro anya na nke a bụ ụlọ ọrụ egwu. Iri afọ ise gara aga, enwere ụlọ ọrụ aka na aha ndekọ aka ole na ole na-ekpebi onye mere ya na ndị na-emeghị. Mgbe ahụ, ụlọ ọrụ redio kpebiri ihe egwu na ihe a na-akpọ. N'agbanyeghị nhọrọ ndị ahịa na-ahọrọ, nrụpụta na nkesa egwu dị oke oke.
Ugbu a, ọ dị mfe. Nke m nwa na-ede, na-ede ihe, ejije, ihe ndekọ, ngwakọta, ma kesaa egwu na ntakịrị ego site na weebụsaịtị nke aka ya. Onweghi onye no n’etiti ya na onye na-eri ahia…. O nweghị onye ga-agwa ya na ya agaghị enwetali ihe ndekọ, ọ dịghịkwa onye ga-ana ya ego ka o tinye CD, ọ dịghị onye ga-agwa ya na ha agaghị akpọ egwu ya. Ebipụla onye agbata-obi azịza!
Nke ahụ jọgburu onwe ya maka nwoke etiti ahụ, mana enwere ndị na - adịghị agwụ agwụ nke 'e bepụ' nke nkesa na nrụpụta n'ihi na ụzọ ndị ahụ adịchaghị ọnụ ma rụọ ọrụ nke ọma. Ọ bụ eke eke. Nsogbu dị na ụlọ ọrụ egwu bụ na ọ dị so nnukwu ego dị n'etiti ndị na-azụ ahịa na onye na-egwu egwu. Enwere ọtụtụ nde ndị ọrụ n’ụlọ ọrụ mụ na gị anụtụbeghị.
Ya mere,… ọ bụrụ na nnukwu onye egwu mere $ 75ka afọ? Gịnị ma ọ bụrụ na ha nwere 401k, ga-arụ ọrụ kwa izu iji weta anụ ezi ahụ, ga-achọ ọrụ ebe a na ebe a there dị njọ? Echeghị m otú ahụ. Amaara m ndị ọrụ ntanetị bụ ndị omenkà nwere lathe - ọrụ ha zuru oke mgbe niile… na ha emebeghị ihe karịrị $ 60ka afọ. Gịnị mere onye egwu ahụ ji baa uru karịa igwe ọrụ ahụ? Ha abụọ rụrụ ọrụ ndụ ha niile na ha art. Ha abụọ ruru ogo nke zuru oke nke mere ka ndị gbara ha gburugburu lebara ha anya ma kwanyere ha ùgwù. Gini mere mmadu ji enweta otutu nde ma onye ozo ghara inwe ndu?
Ihe ndia bu ajuju ndi ulo oru egwu kwesiri ihaputa. Ikike ịkekọrịta egwu site na teknụzụ ga-eduga njikwa ikike ikike dijitalụ na teknụzụ mgbe niile. Ọgbọ ndị ọzọ nke sistemụ arụmọrụ, ndị ozi ozigbo, wdg ga-enwe ndị ọgbọ dị ọcha na ịkekọrịta ndị ọgbọ nke onye na-esighi ike ga-ekpe ikpe. Aga m ping Joe na Joe ga-eso m kerịta egwu - na - enweghị ọrụ ọ bụla n'etiti.
Ilọ ọrụ RIAA na Egwú Egwú na-alụ ọgụ na mbido ụlọ ọrụ. Ha nwere ike gbalịa ịgbatị ya, mana ọ nweghị uru ọ bụla.
Ibe edokwubara ọhaneze: Zoo ma Chọọ
Sep 29, 2006 na 7: 58 AM
Gịnị mere otu onye ji akpata ego ma onye nke ọzọ akpata ego? ”
Maka na agbanyeghị na agaghị m akwụ ezigbo ego iji nọrọ ọdụ na-eche igwe ọrụ, m ga-ere mkpụrụ obi m maka tiketi Rolling Stones.
Ọ bụ ya mere ha ji dị iche. Mụ onwe m, onye na-azụ ahịa, ji ha kpọrọ ihe dị iche iche.